‘विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीको नेपालमा रहेको सम्पत्ति कब्जा हुँदैन’ – उपप्रधानमन्त्री पोखरेल - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > NRNA > ‘विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीको नेपालमा रहेको सम्पत्ति कब्जा हुँदैन’ – उपप्रधानमन्त्री पोखरेल
‘विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीको नेपालमा रहेको सम्पत्ति कब्जा हुँदैन’ – उपप्रधानमन्त्री पोखरेल
NRNA क्यानडा विशेष नेपाल समाचार विश्व समाचार
March 30, 2019 March 30, 2019 GRISHI420
विदेशको नागरिकता लिनुभएका नेपालीहरुले नेपालमा जोडेको सम्पत्ति सरकारले कब्जा गर्ने कुरा निराधार हल्लामात्र रहेको उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरलले बताउनुभएको छ । अमेरिकाको भ्रमणमा रहनुभएका पोखरेलले खसोखासका प्रधानसम्पादक किशोर पन्थीसँग कुरा गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई निश्चिन्त रहन आग्रह गर्नुभएको छ ।
पोखरेलले भन्नुभयो – ‘म एकदम ग्यारेन्टीका साथ भन्छु, विदेशको नागरिकता लिनुभएका नेपालीहरुले नेपालमा जोड्नुभएको सम्पत्तिमाथै कुनै अंकुश लाग्दैन । म एकदम जिम्मेबारीका साथ भन्छु । उहाँहरुले नेपालमा विजनेश ब्यापार र लगानी गर्नुभएको छ भने ढुक्क रहनुभए हुन्छ । त्यो सुरक्षित रहन्छ ।’
विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीको नेपालमा रहेको सम्पत्ति सरकारले कब्जा गर्ने चर्चा छ नि त ? भन्ने प्रश्नमा पोखरेलले भन्नुभयो – ‘कब्जा भन्ने कुरा कहाँबाट आयो ? त्यो बेकारको कुरा हो । त्रास त्यत्तिकै सृजना गरिएको हो । त्यस्तो हुँदैन । विदेशको नागरिकता लिएका नेपालीहरुले संविधान अनुशार नेपालमा राजनीतिक बाहेक सबै अधिकार पाउँछन् ।’
कुनै बेलामा नेपालको नागरिक भएको नेपालीले विदेशको नागरिकता लिएको भएपनि नेपालमा रहेको उसको सम्पत्ति
कब्जा नहुने र अलिकति पनि त्रास नराख्न मन्त्री पोखरेलले सुझाव दिनुभएको छ ।
कोरोना महामारी लामो समयसम्म रहने डब्ल्यूएचओको चेतावनी
April 23, 2020 January 19, 2021 GRISHI
प्रचण्डविरुद्ध अमेरिकामा उजुरी दिएर गल्ती गरेको छैन-तिलकबहादुर श्रेष्ठ